I-Nursery Cottages Suite
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRory
Ifakwe ngasemva kweNursery Cottages indlu enkulu, i-suite inika iindwendwe isihlomelo esibanzi. Ngokungena kwakho kunye nesitshixo sepropathi, indawo yokuhlala, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nepaseji yeyakho ukuba uyonwabele ngasese.
Ukufikelela ngokusuka ekungeneni kwakho kwipaseji enejacket stand kunye nomgangatho ofakwe iithayile ezishushu.
Ekunene ligumbi lokuhlambela; kwakhona kunye nomgangatho ofudumeleyo, ishawari enkulu enentloko ezimbini, iitawuli ezinkulu ezimfumamfuma kunye nezinto zokuthambisa ezincomekayo.
Ngaphakathi kweholo kukho indawo yokuhlala eneFreeview TV, ifriji, imicrowave, iti/ukwenza ikofu kunye nezinto zokuhombisa zale mihla.
Phezulu kwigumbi lokulala elinebhedi enkulu ephindwe kabini (inokwahlulwa ibe ngabantu abangabodwa njengoko kufuneka), izinto zangoku kunye nefenitshala.
Isikhululo sepetroli, ivenkile encinci, indawo yokutyela kunye nebar zonke zingaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5. IFort Augustus luhambo olufutshane lwemoto yemizuzu eli-10 nokufikelela kwiindawo zokutyela ezininzi kunye neendawo zokutyela.
Sijonge ngomdla ukubhukisha kwakho kwaye samkele nayiphi na imibuzo onayo.